Nezvedu - Chengdu Datang Kukurukurirana Cable Co., Ltd.
Inoenderana Zvishandiso zveOptcial Cable
Chengdu Datang Kutaurirana Cable Co., Ltd.iri iri muChengdu Hi-Tech dunhu (kumadokero zone). Iyo inoumbwa neFifth Research Institute yePost uye Telecommunication (FRIPT), iyo yakatanga kuita mukutsvagisa nekusimudzira kwetambo yemazuva ano netekinoroji yekutaurirana muChina kubva kuma1970.
Gore rese, isu tinoburitsa: 1 miriyoni bhokisi re lan tambo, 80000km coaxial tambo uye 3.5 mamirioni epakati km e optical fiber tambo. Kugadzirwa kwetambo kunotengeswa zvinopfuura mamirioni makumi mana nemasere emadhora / gore.
Kuremekedza musimboti we "Kushandisa yekutanga-kirasi tekinoroji michina, neyekutanga-kirasi manejimendi, ichipa yekutanga-kirasi zvigadzirwa uye sevhisi kune mutengi", Chengdu Datang Kutaurirana Cable Co, Ltd. iri mukuomerera zvinoenderana neiyo ISO 9001 yemhando yekuvimbiswa sisitimu, ISO14001 yekuvimbiswa kwezvakatipoteredza system zvinodiwa uye ROHS kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kurairirwa kwekuonekwa. Yakagadzika yakasimba sisitimu manejimendi manejimendi maitiro ayo akaitwa zvine mutsindo.
Seyakakwira tambo yekugadzira tambo, Datang Kutaurirana Cable inopa dzakasiyana siyana fiber fiber tambo, coaxial tambo uye nenhumbi dzayo, symmetrical tambo uye inobatanidza Hardware ye cabling system.
Datang Kutaurirana Cable Co., Ltd. yakavambwa muna 1999 kumadokero yepamusorosoro zone Chengdu, inovhara mahekita zana nemakumi mashanu, mashopu mana, uye ine vashandi vanosvika mazana mana. Kunyangwe iyo kambani inomisikidzwa chete kutenderera makore gumi neshanu, asi DTT tambo yakaunganidza makore angangoita makumi mashanu eR & D, uye inogadzira ruzivo mune tambo dzekutaurirana. Yakatemwa pazasi ndiyo nhanho dzeiyo nhoroondo yeDTT Cable.
Muna 1965: Kubva kubva ku5th Research Institute yePost & Telecommunication (Akafanotungamira FH&DT)
Muna 1987: Iyo 1st tambo yekuona yeChina yakagadzirwa ne5th Tsvagiridzo Institute yePost & Telecommunication
Muna 1998: Datang Telecom Technology Co., Ltd (DTT) Ruzhinji kodhi kodhi iri 600168
Muna 1999: Chengdu Datang Kukurukurirana Cable Co., Ltd.
Muna 2017: Kuvambwa kweCICT kunoreva kuti Kambani Huru Yenyika Yese Yekukurukurirana muChina yakabuda
Kusvikira ikozvino: Chengdu Datang, senhengo yeCICT, iri kuvandudza musika wayo wepasirese
● Yepamberi michina yekugadzira neyekunze
● Chiitiko ichi: tarisa pakutsvagisa tambo uye hunyanzvi kubvira 1965. Anopfuura makore makumi mashanu chiitiko & nyanzvi timu yehunyanzvi yekugadzira tambo.
● ISO mhando yekudzora system, UL, ETL uye mamwe akawanda manejimendi & hutano uye chengetedzo system chitupa.
● Mauto network, redhiyo uye terevhizheni, mafuta, telecommunication network yekuwana mvumo
● Iyo drafter uye huwandu hwakawanda hwedhipatimendi redzimba reruzivo rwekuongorora indasitiri, zvitupa nematanho.
● Zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi maviri pasirese, iwo mushandirapamwe wekudyidzana wevashandisi vekunze vekufona.
Chengdu Datang Kutaurirana Cable Co., Ltd. nharaunda inotsika ichienderera mberi ichiwedzera, uye isu takagadzira bhizinesi muSpain, Canada, USA, Belarus, Italy, Laos, India, Indonesia, Vietnam, Kuwait, Brunei, UAE, Saudi Arabia, Ecuador, Malaysia neThailand.
►Iyo R & D yepakati paWire & Cable kutapurirana muChina
►Iyo inoshanda unit muChina yakasarudzwa neITU-T 6th groupgroup
►Nhengo yeKiyi yeWadhi & Cable Committee yeChina Institute of Communications
►More zvinopfuura zana yenyika indasitiri zviyero uye patent yekutaurirana tambo zvigadzirwa
►Main rukova mutengesi weChinese vatatu vanoshanda
►Mhando yepamusoro gumi yekabhurosi system kubvira 2009